कोरोना संक्रमणबाट १ सय ४६ जनाको मृत्यु, ३१ हजार संक्रमित – BFM 91.2
कोरोना संक्रमणबाट १ सय ४६ जनाको मृत्यु, ३१ हजार संक्रमित
August 22, 2020 August 22, 2020 Bfm	0 Comments
विराटनगर, ६ भदौ । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा ९ जना व्यक्तिको कारोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।
मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले देशका विभिन्न जिल्लामा ९ जना मानिसहरुको कोभिड संक्रमणका कारण मृत्यु पुष्टि भएको बताउनुभयो । प्रवक्ता गौतमका अनुसार सुनसरीमा ६ वर्षीय बालिका र ६७ वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै पर्सामा ४८, ५८ र ६१ वर्षका तीन जना पुरुषहरुको मृत्यु भएको छ ।
बारामा १ जना ५८ वर्षीय पुरुष, सिराहामा ६८ वर्षीय पुरुष, मकवानपुरमा ५६ वर्षीय पुरुष र भक्तपुरमा ७३ वर्षीय पुरुषको पनि कोभिड १९ संक्रमणबाट मृत्यु पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो । यससँगै नेपालमा कोभिड १९ संक्रमणबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ४६ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ६ सय ३४ जनामा कोभिड १९ संक्रमण पुष्टि भएको छ । यससँगै कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या १२ हजार ६ सय २१ पुगेको छ । हालसम्म पुष्टि भएको संक्रमितको संख्या ३१ हजार १ सय १७ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा २ सय १६ जना कोभिड १९ संक्रमित पुष्टि भएको छ । जसमध्ये काठमाडौंमा १ सय ६० जना, ललितपुरमा ६ जना र भक्तपुरमा ५० जना रहेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा १२ हजार ५ सय १९ पीसीआर परीक्षण भएको छ । हालसम्म कुल ५ लाख ९२ हजार ४ सय १८ पीसीआर परीक्षण भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमका अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरुको संख्या ८ हजार ७ सय ५ जना रहेको छ । यस्तै होम क्वारेन्टाइनमा रहने संक्रमितहरुको संख्या ३ हजार ९ सय १६ रहेको छ । आज देशभर ११ हजार ६ सय ५८ व्यक्तिहरु क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या १ सय ३६ रहेको छ भने आज सम्म संक्रमण निको भई डिस्चार्ज हुनेहरुको संख्या १८ हजार ३ सय ५० जना पुगेको छ ।
← विराटनगरमा ३३ सहित प्रदेश १ मा १ सय २ संक्रमित थपिए
विश्वभर कोरोनाबाट ८ लाख ७ हजारको मृत्यु →
कतार एयरवेजबाट नेपाल फर्कने प्रदेश १ का चार जनाको पहिचान
एमसीसी बुझेर मात्र स्विकार गनुृपर्छ : डा. शेखर
June 11, 2020 June 11, 2020 Bfm	0
चार जना नर्सलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि